IPodcast 11x48: NgoSeptemba nango-Okthobha yabelana ngayo | IPhone iindaba
Kule veki ukubalasela kuthathwe kulindelo lwe-Apple kunye neminyhadala. Kukhutshwa ngo-Septemba kunye nomsitho ngo-Okthobha, okanye konke ngo-Okthobha ... I-iPad kunye neApple Bukela ngoSeptemba nakwi-iPhone ngo-Okthobha… Konke ngo-Okthobha… kunye neMini yePod yasekhaya? Kwaye isiseko soMoya? Sithetha ngayo yonke le nto nangaphezulu kule podcast yale veki.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » IPhone iindaba » podcast » IPodcast 11 × 48: NgoSeptemba nango-Okthobha babelana ngayo
Umwisi-mthetho wase-Russia ufuna ukunciphisa iKhomishini yeVenkile yeApple ukuya kwi-20%